एक करोड खोप आउँदै, कुन देशबाट कति ? - Baikalpikkhabar
एक करोड खोप आउँदै, कुन देशबाट कति ?
१५ साउन/ कोभिड-१९ विरुद्धको एक करोडभन्दा बढी खोप भदौ महीनाभित्रै आउने कार्यतालिका रहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, विभिन्न देशबाट अनुदान र खरीद गरेर एक करोड पाँच लाख ३८ हजार डोज खोप आउन लागेको हो। जसमध्ये ४५ लाख खोप भदौ पहिलो साता आउने परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिए ।
महाशाखाका अनुसार, चीन सरकारले अनुदानमा दिने १६ लाख डोज भेरोसेल खोप साउन मसान्तभित्र आउनेछ। कोभ्याक्स सुविधामार्फत जापानले दिने १६ लाख डोज अस्ट्राजेनेका खोप भदौ पहिलो साता आउने कार्यतालिका छ ।
त्यस्तै, कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नै तीन लाख ३८ हजार डोज खोप भदौ पहिलो साता आउन लागेको डा. पोखरेलले बताए। यसअघि भारतको सेरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाबाट खरीद गरेको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप पनि भदौ पहिलो साता आउने भएको छ ।
यसका अतिरिक्त सरकारले चीनसँग ६० लाख डोज भेरोसेल खोप खरीद गरेको छ। यो खोप भदौ मसान्तभित्रै आउने उनले बताए ।
सरकारले कोभिशिल्ड, मोडर्ना, जोन्सन एन्ड जोन्सन र सिनोभ्याक गरी थप एक करोड ५० लाख डोज खोप खरीद गर्न लागेको महाशाखाले जनाएको छ। बालबालिकाका लागि ६० लाख डोज फाइजर खोप ल्याइने भएको छ।
यो खरीद प्रक्रिया शुरू भएको डा. पोखरेलले बताए। यससँगै चैत मसान्तसम्म तीन करोड २३ लाख खोप आउने कार्यतालिका रहेको उनको भनाइ छ।
अहिलेसम्म नेपालमा ३६ लाख ५० हजार ७३३ जनाले पहिलो मात्रा र १५ लाख ४८ हजार ८०३ जनाले पूर्ण खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ। अहिले खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
परिवार महाशाखाका निर्देशक डा. पोखरेलका अनुसार, हालसम्म ९७ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आएको छ। जसमध्ये कोभिशिल्ड २४ लाख ४८ हजार, भेरोसेल ५८ लाख र जोन्सन एन्ड जोन्सन १५ लाख ३४ हजार ८५० डोज छ।
यसमध्ये कोभ्याक्स सुविधा मार्फत भारतबाट कोभिशिल्ड तीन लाख ४८ हजार र अमेरिकाबाट जोन्सन एन्ड जोन्सन १५ लाख ३४ हजार ८५० मात्रा, वैदेशिक अनुदानबाट २९ लाख मात्रा, चीनबाट १८ लाख मात्रा र भारतबाट ११ लाख मात्रा रहेका छन्।
सरकारले खरीद गरेर ५० लाख डोज खोप ल्याएको छ। जसमा भारतबाट आएको कोभिशिल्ड १० लाख र चीनबाट भेरोसेल ४० लाख डोज रहेको छ।
सरकारले कुल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत अर्थात् पहिलो प्राथमिकतामा रहेका दुई करोड १५ लाख र पछिल्लो समय १२ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका ४९ लाख गरी कुल दुई करोड ६५ लाखमा खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। ती सबैलाई खोप लगाउनका लागि कुल पाँच करोड ३५ लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्छ ।
असोज मसान्तभित्र ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइने र चैत मसान्तभित्र सबै लक्षित समूहलाई खोप लगाउने सरकारको तयारी छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि रु.३७ अर्ब ५३ करोड रकम कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोपका लागि रु.२६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। (रासस)
शुक्रबार, १५ साउन, २०७८, बिहानको ०८:४५ बजे